Sidee loo xareeyaa xogta laga soo wado Website-ka Python & BeautifulSoup? - Jawaab celceliska
A webka qaab gaar ah oo lagu caawinayo raadiyaha webka si ay ula yimaadaan natiijooyinka ay u baahan yihiin. Waxay leedahay tiro codsiyo ah suuqa dhaqaalaha, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xaalado kale. Tusaale ahaan, maareeyayaashu waxay u isticmaalaan inay isbarbardhigaan sicirka alaabooyinka kala duwan.
Web Wicidda leh Python
Python waa luuqad barnaamij oo wax ku ool leh oo leh erayo weyn iyo code. Waxay ku haboon tahay bilowga xitaa sababtoo ah fursado badan oo kala duwan oo ay leedahay. Ka sokow, Python waxay isticmaashaa maktabad gaar ah oo la yiraahdo Soup Beautiful. Websaydhada waxaa lagu qoray qoraal HTML ah, taas oo ka dhigaysa shabakad dukumenti qaabaysan. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin in ay xasuustaan ​​in boggaga kala duwan aysan had iyo jeer bixin waxyaabaha ku jira habab raaxo leh. Natiijadu, natiijada shabakadda waxay u muuqataa inay tahay doorasho wax ku ool ah oo faa'iido leh. Dhab ahaantii, waxay siinaysaa dadka isticmaala fursad ay ku sameeyaan waxyaabo kala duwan oo ay isticmaalaan Microsoft Word.
LXML & Codsi
LXML waa maktabad weyn oo loo adeegsan karo si dhakhso ah iyo si fudud. Xaqiiqdii, maktabadda LXML waxay fursad u siinaysaa raadiyaha webka si ay u sameeyaan dhismayaasha dhirta si fudud loo fahmi karo iyadoo la isticmaalayo XPath. Si gaar ah, XPath waxa ku jira macluumaadka waxtarka leh. Tusaale ahaan, haddii dadka isticmaala ay rabaan inay soo saaraan cinwaanada goobaha qaarkood, waxay u baahan yihiin marka hore in ay qeexaan halka ay ku qoran tahay astaanta HTML.
Bilaabbeyayaashu waxay ku adkaan kartaa inay qorto xeerarka. Luqadaha barnaamijyada, dadka isticmaala waa inay qoraan xitaa hawlaha aasaasiga ah. Wixii hawlo dheeri ah, raadiyeyaasha webka waa inay sameeyaan qaab-dhismeedkooda xogeed. Si kastaba ha ahaatee, Python waxay noqon kartaa caawimaad aad u weyn oo loogu talagalay, sababtoo ah marka la isticmaalayo, ma aha inay qeexaan qaab kasta oo xogta ah, maxaa yeelay boggani wuxuu bixiyaa qalab u gaar ah dadka isticmaala si ay u gutaan waajibaadkooda.
Si aad u xoqdo bogga internetka oo dhan, waxay u baahan yihiin inay soo dejiyaan iyadoo la isticmaalayo maktabadda Python. Natiijada, maktabadda codsiyada waxay ka soo dejisan kartaa bogagga qaarkood. Raadinta internetka waxay u baahan tahay inay xasuusnaato in ay jiraan noocyo kala duwan oo codsiyo ah.
Qodobada Python Scraping Rules
Ka hor intaanan ka dhicin boggaga internetka, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin inay akhriyaan boggooda shuruudaha iyo shuruudaha si ay uga hortagaan dhibaatooyinka sharciga ah mustaqbalka. Tusaale ahaan, ma aha fikrad wanaagsan in aad codsato xog aad u daran. Waxay u baahan yihiin inay hubiyaan in barnaamijkoodu uu u dhaqmo sida aadanaha. Mid ka mid ah codsiga hal bog oo boga labaad ah waa doorasho weyn.
Markaad booqanayso goobo kala duwan, raadiyeyaasha webka waa in ay isha ku hayaan mawduucooda sababtoo ah waxay isbedelaan waqti ka waqti. Sidaa darteed, waxay u baahan yihiin inay dib u booqdaan isla goobta oo ay dib u qoraan codkooda haddii loo baahdo.
Helitaanka iyo qaadashada xogta internetka waxay noqon kartaa hawl culus oo Python ka dhigi karta nidaamkan mid fudud sida ay noqon karto Source .